OLAC Record: Fonds Denise Bernot, birman, thaungtha, 1968, bande 069, face B
Title: Fonds Denise Bernot, birman, thaungtha, 1968, bande 069, face B
Abstract: A man pronouncesaseries of words/sentences organised in different themes, and numbered (in English) from 1 to 221, first in Burmese language, and then in Taungtha language (Rungtu Chin) (three times each).
Un homme prononce une série de mots/phrases organisés en différents thèmes, et numérotés (en anglais) de 1 à 221, premièrement en birman, puis ensuite en langue taungtha (rungtu chin) (trois fois chacun).
လူတဦးက ၁ မှ ၂၂၁ ထိ နံပါတ်စဥ်များကိုသာ အဂင်္ လိတ်ဘာသာဖြင့် ရွတ်ဆို၍ အတွဲလိုက်ရှိသောစကားလုံးများနှင့် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအတွက် စုစည်းထား သောဝါကျများကို ပထမတွင် မြန်မာဘာသာဖြင့်တလှည့် ဆိုပြီးနောက် ေတာင်သားဘာသာ (ရုန်းတူချင်းဘာသာစကား)ဖြင့်တလှည့်ု တခုကိုသုံးကြိမ်စီရွတ်ဆိုပြသည်။
Alternative Title: Fonds Denise Bernot, Burmese, Thaungtha, 1968, tape 069, side B
Description: Un homme prononce une suite de mots/phrases numérotés (en anglais) de 1 à , d'abord en birman, puis en Thaunghta (trois fois chacun). Thème: temps, saisons, points cardinaux, géographie, paysages, minéraux, métaux (jusqu'à n°37, 9.50mn). Thèmes: couleurs, plantes, fruits, légumes, graines, épices (jusqu'à 75, 21.50mn) Thèmes: cuisine, ingrédients, ustensiles, riziculture (la bande accélère à partir de 24mn), fruits, bois (la bande est incompréhensible à partir du mot 82.74, 29.30mn et s'arrête à 29.38mn). L'enregistrement reprend à 30mn, mais la bande est très lente et incompréhensible. (Reprend au mot 82.56 à 30.50mn) Thèmes: fruits, légumes, épices (jusqu'au mot 82, 35mn). Thèmes: masculin, féminin, famille, parenté, âge, animaux, pêche, insectes, batraciens (la bande accélère au mot 143, 45mn) Thèmes: homme, femme, famille, âge, marriage, parenté (jusqu'au mot 176, 54.40mn) Thème: le corps, les organes (jusqu'au mot 212, 1h). Thème: nourriture (jusqu'à 221)
A man pronouncesaseries of words/sentences (numbered), first in Burmese language, and then in Taungtha language (Rungtu Chin) (three times each). Subjects: time, seasons, cardinal points, geography, landscapes, minerals, metals (from n° 1 to 37, until 9.50 min.) Subjects: colours, plants, fruits, vegetables, grains, spices (until n°75, 21.50 min.) Subjects: cooking, ingredients, utensils, rice cultivation (the recording accelerates after 24 min.), fruits, wood (the recording is incomprehensible from the word n°82.74, 29.30 min., and stops at 29.38 min.) Recording starts again at 30 min., but is rather slow and almost incomprehensible. (Starts again at word n°82.56, 30.50 min.) Subjects: fruits, vegetables, spices (until word n°82, 35 min.) Subjects: male, female, family, kinship, age, animals, fishing, insects, amphibians (the recording accelerates at word n°143, 45 min.) Subjects: men, women, family, kinship (until word n°176, 54.40 min.) Subjects: body parts, organs (until word n°212, 1h) Subject: food (until word n°221, end of the recording).
လူတဦးက အတွဲလိုက်ရှိသောစကားလုံးများနှင့် အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးအတွက် စုစည်းထား သောဝါကျများကို နံပါတ် ၁ မှ ၂၂၁ ထိ ရွတ်ဆိုသည်။ ပထမတွင် မြန်မာဘာသာစကား ဆိုပြီးနောက် ေတာင်သားဘာသာစကား (ရုန်းတူချင်းဘာသာစကား)ဖြင့် တခု ကိုသုံးကြိမ်စီရွတ်ဆိုပြသည်။ အကြောင်းအရာများ။ ။ အချိန်၊ ရာသီဥတု၊ အရပ်မျက်နှာ၊ ပထဝီအနေအထား၊ ရှုခင်း၊ တွင်းထွက် ပစ္စည်းများ၊ သတ္တုများ (နံပါတ် ၁ မှ ၃၇၊ ၉.၅၀ မိနစ် ) အကြောင်းအရာများ။ ။ အရောင်များ၊ အပင်များ၊ အသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစေ့အဆန်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ (နံပါတ် ၇၅ ထိ၊ ၂၁.၅၀ မိနစ်) အကြောင်းအရာများ။ ။ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ရာဝင်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ချက်ပြုတ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ စပါးထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခြင်း (အသံသွင်းမှု ၂၄ မိနစ် နောက်ပိုင်းတွင်မြန်လာသည်) သစ်သီးများ၊ သစ်တော(အသံသွင်းမှုတွင် နံပါတ် ၈၂.၇၄၊ ၂၉.၃၀ မိနစ်မှ စကားလုံးများကို နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ ၂၉.၃၈ မိနစ် တွင်ရပ်သည်) အသံသွင်းမှုကို ၃၀ မိနစ်တွင်ပြန်စသည် အတော်နှေးသည်။ နားလည်ရန်ခက်ခဲသည်။ (နံပါတ် ၈၂.၅၆၊ ၃၀.၅၀ မိနစ် တွင်ပြန်စသည်) အကြောင်းအရာ။ ။ အသီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ (နံပါတ် ၈၂ ၊ ၃၅ မိနစ်ထိ) အကြောင်းအရာ။ ။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်ပုံ၊ အသက်၊ တိရစ္ဆာန်၊ ငါးဖမ်းခြင်း၊ ပိုးမွှားများ၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ (အသံဖမ်းမှု နံပါတ် ၁၄၃၊ ၄၅ မိနစ်တွင်အရှိန်မြန်လာသည်) အကြောင်းအရာ။ ။ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ မိသားစု၊ ဆွေမျိုးတော်စပ်ပုံ၊ (နံပါတ် ၁၇၆၊ ၅၄.၄၀ မိနစ်ထိ) အကြောင်းအရာ။ ။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ (နံပါတ် ၂၁၂၊ ၁နာရီ) အကြောင်းအရာ။ ။ အစားအစာများ (နံပါတ် ၂၂၁၊ အသံအဆုံးထိ)
Identifier: Ancienne cote: crdo-BER_1968_BUR_069_B
Identifier (URI): https://cocoon.huma-num.fr/exist/crdo/meta/cocoon-17d124ae-009b-3ef3-9074-e33feb5e103e
Is Format Of (URI): https://cocoon.huma-num.fr/data/bernot/private_bernot/masters/BER-1968-BUR-069-B.wav
Terms: area_Asia area_Europe country_GB country_MM dcmi_Sound iso639_eng iso639_mya iso639_rtc olac_lexicon olac_narrative